वडाध्यक्षलाई फोनैफोन – sunpani.com
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले विदेशबाट आएका व्यक्तिले सम्पर्क गर्नु भन्ने सूचना जारी गर्नुभयो । त्यो सूचना वडाभरी फैलियो । सूचनामा विदेशबाट आउनु भएको छ र १४ दिन पुगेको छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर मोबाइल नम्बर दिइएको थियो ।
सूचनामा घरपरिवारलाई मात्रै होइन, आसपासका छिमेकीले पनि त्यस्तो सूचना दिन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो । नाम गोप्य राख्ने भनिएको थियो ।
त्यसपछि त के चाहियो र ? वडाध्यक्ष रिजाललाई फोनै फोन आउन थाल्यो । वडाध्यक्ष रिजालका अनुसार, एक महिलासहित चार जनालाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ । बाँकी पाँच जनालाई घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
भारतबाट आएका तीन जना जो घरमा आएको ८, ९ र १० दिनु भएको थियो, उनीहरु र र कतारबाट आएको १० दिन पुगेकी एक महिलालाई स्वास्थ्यकर्मीको टीम बोलाएर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगञ्जको क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ ।
अमेरिका, कतार, दुबई र भारतबाट आएकाहरुलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । उनीहरु आएको १६ दिन भन्दा माथि भइसकेको थियो । वडाध्यक्ष रिजालले भन्नुभयो, अझै मेरो छिमेकीमा भर्खरै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका मान्छे छन् भन्ने फोन आइरहेको छ ।
वडाध्यक्ष रिजालको नयाँ कार्यले कम्तीमा चार जना हालसालै विदेशबाट आएका क्वारेन्टाइनमा पुगेका छन् । अरु सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । यस्तो रणनीति सबै पालिकाहरुले गर्नु जरुरी रहेको छ ।